Posted on 10 / 12 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Tani waxay noqon doontaa dulmar guud oo loogu talagalay ujeedooyinka aqoonta guud kaliya, maahan sida loo hago. Tan macnaheedu maahan inaan aqbalo isticmaalkeeda mana ahan ogolaansho in la isticmaalo.
Badanaa si khaldan loo fahmay ama loo kala soocay- waxaa jira noocyo kala duwan oo steroid ah. Corticosteroids, oo leh waxyeelooyin-xun ayaa ka xun Cudurka Anabolic, sababaha qaar maahan jinniyo warbaahin isticmaalkeeduna runti waa LAAHANSATO kiisaska badankood - oo ay ku jiraan kuwa xirfadda iyo isboortiga iskaashatada ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa la-dagaallanka caabuqa. Waxa kale oo jira Progesterone oo loo adeegsado noocyada badan ee xakamaynta dhalmada oo ay malaayiin haween ah maalin walba qaataan. Steroids Anabolic (halkan waxaa loogu yeeraa AS ama AS) waxa dadku badiyaa ka fikiraan marka ugu horreysa markay maqlaan “steroids” iyo dhammaan waxyaabaha xunxun ee iyaga la xiriira.
A) Atrophy-ga loo yaqaan 'Antiro Atrophy' - marka aad kabto tiro aad u badan Hormoonkaas jirkaaga HPTA wuxuu bilaabaa inuu xiro (wuxuu joojinayaa soosaarka Testosterone maxaa yeelay jirkaaga sifiican ayuu u fiicnaanayaa) Marka la soo gaabiyo tani waxay keenaysaa in kubadahaaga ay yaraadaan. Inta badan xitaa ma ahan mid la arki karo. Waxaa laga yaabaa in hoos loo dhigo 25%, 50% inta ugu badan. Mar alla markaad wareegto wareegga, socodsiiso PCT-gaaga (ka dib wareegga-socodka) waxay ku soo noqdaan cabbir buuxa. Ma ahan mid joogto ah. Dadka qaar waxay wadaan HCG (Human chorionic-gonadatropin) inta ay wareega kujiraan si ay kubadooda u lahaadaan cabir buuxa oo waliba waxay caawiyaan dib u soo kabashada maxaa yeelay waxay sii wadaa unugyadaada leydig inay shaqeeyaan.
B) Xiijo / timo lumis: AS ma keento xiirid ama timo lumis. Si kastaba ha noqotee, waxay dardargelin kartaa hawsha. Haddii timo lumis ku dhacdo qoyskaaga, la yaab waxaad u badan tahay inaad u noqon doonto musharrax dardar gelinaya hawshan. Bill Roberts wuxuu qoray laba nooc oo kala duwan Steroids- Nooca I iyo Nooca II; Nooca I oo ah xeryahooda ugu waaweyn sida Testosterone, Tren, Decca, Sust, iwm iyo Nooca II oo kale ah Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron iwm. Dadka badankood waxay eedeeyaan daroogada sida Winstrol iyo Masteron Enanthate (Drostanolone) Maaddaama ay tahay dambiilaha timo luminta iskuna day inaad ka fogaato daawooyinkaas markii aad ka welwelsan tahay MPB, marka taasi run ahaantii ma ahan nooca nooca waxaan saameyn aad u sareeya ku leeyahay MPB (nabarrada labka) marka loo eego noocyada kale ee daroogada. Waxaana iska cad dawooyinka ku saleysan DHT (sida deca) inay ku sii badanayaan madaxaaga. Sida kaliya ee lagula diriro tani waa iyadoo la qaato Finasteride (propecia / proscar) qaar ka mid ah shaambooyinka noocan oo kale ah shaambooga iyo waxyaabo kale oo lamid ah.
C) Feejignaan- dadka qaar wejiga ayey kaga dhacaan; dadka qaarkiis waxay ka dillaacaan laabta ama dhabarkooda… oo dadka qaarkiis maqaarkoodu wuu iska baaba'aa. Mar labaad, qof walba si gooni ah ayuu u saameeyaa.
D) Waxaan dareemayaa in sidan ay tahay in lagu daboolo atrophy testcha oo nooc uun ah ayaan ilaaway. Waqtiyo badan ayaan maqlayaa dadka ka hadlaya AS oo sameeynaya cabitaankaaga, marka ay dhab ahaantii yihiin kubadahaaga. Marka, si loo caddeeyo, dick-gaagu ma dhuuxo taasina waxay macno badan u leedahay inaad tidhaahdid qaadashada buufin sankaaga ayaa sankaaga yareynaysa. Haddii ay jiraan wax, iyadoo dhiig badan uu ku qulqulayo aagga waxaan dhihi lahaa waxaad u nugul tahay inaad ka hor tagto waxa ka soo horjeeda. Mar labaad waxay kuxirantahay xeryahooda aad qaadatid- daawooyinka qaarkood sida Deca iyo Tren aad bay kuugu dhib badnaan karaan libido (halkan weedha, "deca-dick") qaarna ragga waxay doorteen inay qaataan Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) ama viagra (uma baahnid inaad sameyso) laakiin daroogooyinka kale sida tooska ah ee Imtixaanka (nooc kastoo ah) ama dbol ayaa kugula kici doona inaad derbiyada fuuleyso oo aad u horreyso sida… .. Gabdhaha badankood ee leh nin ama saaxiibka wareega
E) “Cadho-xanaaq” - Ma jiro wax sidaas ah. Way u fududahay taas. Haddii aad tahay qof aan degganeyn, haa, iyagu waxay kaa dhigayaan kuwa aan xasilloonayn badan. Laakiin markale, waxyaabo badan oo kale iyo daawooyin ayaa laga yaabaa inay sidoo kale keenaan taas. Haddii maskaxdaadu tahay mid aan xasilloonayn ama xitaa laga helo cudurka dhimirka, weligaa ha ka fikirin qaadashada steroids. Waxaan jeclaan lahaa in sidan oo kale looga hadlo khamriga. Dadka intiisa badan arintan saameyn kuma lahan. Dadka badankood waxay dareemaan inay ku sugan yihiin xaalad wanaagsan ama aysan haba yaraatee ku kala duwanaan. Waxaan arki karaa dadka laga yaabee inay cibaado helayaan maxaa yeelay xoogaa yar iyo xoog yar, laakiin marka laga soo tago, wax kasta oo soo tebiya “cadho-cadho” (hay'ad dowladeed ama maya) waa fardo.
Steroidsku sababaan in dadku u dhintaan ama u horseedaan dhimashadooda falcelin diidmo leh awgeed. Ma jirin daraasado cilmiyaysan oo muujinaya xiriir toos ah oo laga helo steroids anabolic iyo dhimashada. Dadku waxay tilmaami doonaan Zyzz, laakiin ma tilmaami doonaan taariikhda qoyskiisa ee cudurka wadnaha / xaaladaha mana u maleynaayo in cudurka 'autopsy' weligiis dadweynaha loo fidiyo? Si aad u soo xigato tirakoobka CDC ee ka soo jeeda 2005 ee ka sii Weyn Xoog Weyn:
iyo dhimashada ka dhalata steroids anabolic ……: 3
Haa, haddii steroids loo sameeyo qaab qaldan waxay noqon kartaa khatar. Steroids afka laga qaato (sida dbol, winstrol, anavar, iwm) waa hepatoxic waxayna aad ugu adkaan karaan beerkaaga haddii lagu qaato qadar aad u sarreysa iyo waqti aad u dheer… iyo haddii aad khamri cabto inta aad wareegeyso. Tani waa sababta loo soo jeedinayo in la sameeyo darmaarradda dhiigga kahor, inta lagu jiro, iyo wareegga ka dib. Qaadashada waxyaabaha sida yamaarug caano ah waxay yareyn kartaa culeyska beerkaaga.
Cadaadiska Dhiiggu kor ayuu u kici karaa oo wuu sii kici karaa, mar labaad sidaa darteed waxay kuxirantahay xeryaha aad qaadatid (qaasatan Methandrostenolone (Dianabol) budada iyo EQ). Qaadista bariis khamiir leh waxay gacan ka geysaneysaa in la ilaaliyo kolesteroolka iyo BP-ga. Xaqiiqdii waa wax u baahan in lala socdo. Xaqiiqdiina waa sababta ay tahay inaad u cuneyso CLEAN inta aad kujireyso - oo aadan cunin pizza, burgers, iyo digaag.
Steroidsku waxay qaadanayaan intramuscularly- si aan galmo aheyn. Ma jiro koox ku duuban gacantaada iyo wax kasta oo jira. Haddii lagu duri lahaa xididka ama xididdada dareemayaasha waad dhiman kartaa. Waxaa jira goobo irbado gaar ah oo duritaan ah - suunka ugu aaminka badan suumanka, quads, glute, iyo goobta ventro-gluteal. Dadku badanaa waxay u maleynayaan in dameerka / glutes uu yahay goobta ugu aaminka badan, waan ku raacsanahay maadaama ay adag tahay in la gaaro iyo sababta oo ah dareemaha cilmigu waxay kusugnaadaan aaggaas oo haddii aad ku dhufato, nasiib wacan noloshaada inteeda kale.
Steroidsku waa daawo mucjiso ah. Waxaad ku fariisan kartaa sariir oo waxaad cuni kartaa jukulaato baradho ah waadna weynaan kartaa, laakiin hadii taasi tahay waxaad sameyn laheyd markaad qaadaneyso, waa inaadan xitaa dhibin inaad lumiso lacagtaada. Wali waa inaad shaqada qabataa. Weli waa inaan cunaa wax nadiif ah- waxaan dhihi lahaa xitaa nadiifiye. Wali waa inaad isha ku heysaa wax walba.
Hormoonnada pro-hoormoonka ah ma aha badal badbaado u leh steroids-ka maadaama aad ka iibsan karto GNC / Nafaqada Buuxda / Meelkasta. Iyagu waa khatar aad u badan badanaa marar badanna kama iibsan kartid daawooyinka PCT-ga dhabta ah halkaas ka dibna waxaad ku jirtaa waddo dhab ah, dar dar darri ah oo dib u soo kabasho- haddii aad kasoo kabsato gabi ahaanba. Ilmo badan ayaa ku dhamaaday TRT inta ka hartay noloshooda sababtan darteed. Ma fahmin sida aysan u dhicin dacwad ka dib dacwadaha ka dhanka ah dukaanadan.
MK-677 (Ibutamoren) miyuu si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Muscle? Dib u eegista Sarm [2019 NEW]	Tilmaanta Iibsashada oo Dhammeystiran 2019 ee loogu talagalay SARM SR9009 Joogtada Dhismaha